Qorraxda oo qaawan iyo faa'iidooyinka ugu weyn | Bezzia
Qorraxda oo qaawan iyo faa'iidooyinka ugu weyn
Susana godoy | 19/06/2022 20:00 | Quruxda
Hadda oo cimiladu halkan tahay, waxaa laga yaabaa inaad ka fekereyso gabbaldhac qaawan. Sababtoo ah waa mid ka mid ah dhaqamada sida soo kordheysa loogu taliyay waxayna leedahay faa'iidooyin badan oo ay tahay inaad ku xisaabtanto. Dabcan, mar kasta oo aan nafteena hoos galno qorraxda, waa in aan sameyno taxadar aad u badan si aan u daryeelno maqaarkayaga.
Markaa haddaynu qaawanno, waa inaad xisaabta ku dartaa. Sida meelaha qaar ee jirka ayaa aad uga xasaasisan kuwa kale. Taasi waxay tidhi, waxa kaliya oo hadhay in la ogaado faa'iidooyinka aad awoodid inaad qoraxda ku maydho sidii Ilaah kuu keenay aduunka. Waxaa laga yaabaa in xilli ciyaareedkan lagugu dhiirigelinayo inaad ka tagto dharka dabaasha dhinac!
1 Qorrax-baxa oo qaawan ayaa kordhin doona heerka fitamiin D-gaaga
2 Waxay hagaajisaa niyadda
3 Caafimaad badan oo wadnahaaga ah
4 Dareen dheeraad ah oo xorriyadda
5 Waxay kaa ilaalisaa xanuunka macaanka
Qorrax-baxa oo qaawan ayaa kordhin doona heerka fitamiin D-gaaga
In kasta oo aanay daruuri ahayn in labbiskiisa la siibo, Haa in qorraxdu ay heerka fitamiin D ka dhigi doonto mid wanaagsan. Waa mid ka mid ah fiitamiinnada lagama maarmaanka u ah lafaha adag iyo caafimaadka leh. Sidaas awgeed waxay ka ilaalin doontaa dhammaan noocyada cudurrada iyaga la xiriira. Iyadoo aan la iloobin in mahadda fiitamiinkan ay jiraan hawlo kale oo jidhka ah oo la xakameyn karo. Maadaama ay sidoo kale leedahay sifooyinka anti-bararka. Markaa waxaad ogaataa inay tahay shay muhiim u ah noloshaada iyo caafimaadkaaga.
Waxay hagaajisaa niyadda
Xaqiiqdu waxay tahay in dad badan qorraxdu ay qaawanaan tahay mid ka mid ah dhaqamada ugu wanaagsan. Sida waxay kordhin doontaa serotonin iyo iyada, si loo dareemo firfircooni badan. Markaa tani waxay mar walba dhalin doontaa dareen farxadeed oo aan si fiican u qalano. Laakiin ma aha oo kaliya, laakiin sidoo kale, iyada oo la dareemayo hagaajinta niyadda, waxaan sidoo kale dhihi karnaa in walbahaarka ayaa laga tagay. Waxaan had iyo jeer isku daynaa inaan helno doorashooyin aan nafteena uga xoreyno walbahaarka iyo dabcan, qorraxdu waxay noqon kartaa mid ka mid ah kuwa ugu fiican. Waxaad dareemi doontaa wax aad u wanaagsan mar walba, nasasho badan, taasina mar walba waa war wanaagsan.
Caafimaad badan oo wadnahaaga ah
Waa mashiinka ugu muhiimsan ee jirkeena sidaas darteed, waa inaan mar walba daryeelnaa ugu badnaan. Haddaba, qorraxdu waxay u roon tahay qalbiga sababtoo ah sidaas baa la yiri wuxuu yareeyaa cadaadiska dhiigga. Waxaad hore u ogtahay in tani ay tahay mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee cudurada wadnaha ee kala duwan. Markaa, marka aan iska ilaalino, waxaan dareemi doonaa fiicnaan iyo sidoo kale, waxaan ka ilaalin doonaa dhammaan noocyada dhibaatooyinka. Dabcan, mar labaad waa inaan sheegnaa inaan haysano fitamiin D badan sababtoo ah waa mid kale oo ka dhigi doona mid aad u caafimaad badan wadnaha.
Dareen dheeraad ah oo xorriyadda
Hubaal marar badan, marka aad tagto xeebta, aad ka warqabto dabaasha. Mararka qaarkood way adkaataa, marar kalena hoos ayay u dhacdaa, waxayna had iyo jeer adkeyn kartaa maalinteena. Hagaag, faa'iido kale oo ay leedahay qorrax-baxa qaawan ayaa ah inaadan la kulmi doonin dhibaato la mid ah. Xoriyaddu waxay noqon doontaa doorashadaada ugu fiican si aad ugu raaxaysato maalin samaynta waxa aad jeceshahay oo aad kasbato nolol yar, iyada oo ay ugu wacan tahay faa'iidooyinka intiisa kale ee aan ka faalloonnay.
Waxay kaa ilaalisaa xanuunka macaanka
Ma ogtahay in qorraxdu ay sidoo kale u fiican tahay ka hortagga sonkorowga? Waa hagaag, waana inaad xisaabta ku dartaa. Dabcan, tani waxay sidoo kale la xiriirtaa fiitamiin D, taas oo u muuqata inay leedahay awoodda wax kasta oo la xidhiidha qorraxda. Si kastaba ha ahaatee, haysashada heerar wanaagsan oo fiitamiinkan ah iyo qorraxdu way la xidhiidhaan waxayna sidoo kale naga caawiyaan dhinacyo badan oo kale oo caafimaadkeena ah.
Sidaa darteed, haddii aad rabto inaad isku daydo inaad qorrax-baxsato adigoo qaawan, hubaal waxaad heli doontaa xeeb ku siinaysa ikhtiyaarka oo aad bilaabi karto inaad dareento mid kasta iyo mid kasta oo ka mid ah faa'iidooyinka sida kuwa aan ka faalloonnay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Quruxda » Qorraxda oo qaawan iyo faa'iidooyinka ugu weyn
Renaissance, albamka cusub ee Beyoncé, ayaa hore u lahaa taariikhda la sii daayo
Farqiga u dhexeeya walaaca iyo cabsida